सडक दुर्घटनामा परि अपांग बिनोद बिश्वकर्मा घर फर्किए
2017-12-24 | तीताेपाटी डट कम
चन्द्र बिश्वकर्मा – नमूना बिश्वकर्मा समाज नेपाल-कुवेतको बिशेष पहलमा २ वर्ष अघि सडक दुर्घटनामा परि अपांग बनेका सफा नेश्नल क्लिनिङ कम्पनीका बिनोद बि.क. अथक प्रयास पश्चात् २२ डिसेम्बर २०१७ शुक्रबार वटानिया एयरवेजको फ्लाइट बाट घर फर्किएका छन ।
नमुना बिस्वकर्मा समाजले नेपाल कुवेतले "बिनोद बि.क सहयोग अभियान" संचालन गरि रु. १,३१,००० अक्षरुपि एक लाख एकतीस हजार सहयोग रकम संकलन गरि, अपांग बिनोद बि.क लाई हस्तान्तरण गरेको छ । नमुना बिश्वकर्मा समाज नेपाल कुवेतको विशेष पहलमा कम्पनी बाट पाउनु पर्ने बिमाको रकम पनि बिनोदले प्राप्त गरेको सस्थाका अध्यक्ष कुल बहादुर बिश्वकर्माले जानकारी गराएका छन ।
साबिका केशबटार गाविस वडा न ९ तनहुँका ३० बर्षीय बिनोद बिक ७ वर्ष पहिला कुवेत आएका थिए । २ वर्ष पहिला दशैको अवसर पारेर घर जाने तयारीमा रहेका बिनोद डिउटी जाँदा बाटो काट्ने क्रममा इजिफ्सियन नागरिकले चलाएको गाडीले ठक्कर दिदा उनी सख्त घाइते भएका थिए ।
शरीरका धेरै ठाउँमा चोट लाग्नुका साथै उनको खुट्टामा भाँचिन गर्इ अलराजी अस्पताल सुयोख तथा फरवानिया अस्पताल गरी करिब ११ महिनाको उपचार गराएका थिए । १ वर्ष अघि देखि कम्पनीको क्याम्पमा दयनिय अबस्थामा रहेका थिए । भाँचिएको खुट्टामा स्टील लगाएको छ भने दुर्घटनाको बखत चोट लागेका घाउहरू सन्चो भए पनि ढाडमा मासुको डल्लो पलाएर बाहिर निस्किएको छ । हाल एउटा खुट्टाले काम नगरे पछि उनी केही पनि काम गर्न सक्दैनन् ।
बिनोद बि.क ले आँसु झार्दै भने " म झन्डै मरिसकेको मान्छे पनि बाचेको छु । घरमा छोरा छोरिहरुको धेरै याद आइरहेको छ । प्रदेशमा पैसा कमाएर छोरा छोरी पढाउने सपना बोकि आएको थिए तर अपांग भएर घर जाँदै छु । कसरी मैले मेरो घर परिवार चलाउने होला ? घर परिवारको मुलि मान्छे नै अपांग भएर काम गर्न नसक्ने भएको छु "। आर्थिक सहयोग गरेकोमा कुवेतमा कृयाशिल नेपाली संघ सँस्थाहरू तथा सामाजिक अभियन्ताहरू लगायत सम्पुर्ण सहयोगी मनहरूलार्इ बिनोद बि.क. ले धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।